Madaxweynaha oo beesha caalamka ka dalbaday ineey caawiso maamul goboleedyada – Radio Muqdisho
Madaxweynaha oo beesha caalamka ka dalbaday ineey caawiso maamul goboleedyada
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku boorriyay beesha caalamka iney caawiyaan maamul goboleedyada dalka ka dhismaya.
Madaxweynaha oo ka hadlay munaasabaddii shalay lagu caleemasarayay madaxweynaha maamulka K/galbeed Soomaaliya ayaa beesha caalamka ka dalbaday ineey door wanaagsan ka qaataan dhismaha iyo horumarinta maamullada dalka ka hanaqaaday.
“Beesha Caalamku ineey usoo deg degto maamul goboleedyada oo ay tayeeyso awoodda dhinaca maamulka, maamulka hadda laga dhisay Beydhabo hoolkaanaa u guri ah oo ma heystaan xafiisyo iyo xarumo maamulku ku shaqeeyo, waxaan rabnaa caalamku inuu yimaado oo maamulladan dhismaya wax lala qabto” ayuu yiri madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa soo hadal qaaday kala aragti duwanaanta u dhaxeysa isaga iyo R/wasaarihiisa Dr. C/weli Sheekh Axmed, wuxuuna ka dalbaday shacabka ineey is dejiyaan, isagoo xusay in arrintaasi aysan saameeyn ku yeelaneynin horumarka iyo dowladanimada.
Dhinaca kale madaxweynaha ayaa mar kale ugu baaqay dhalinyarada ay marin habaabiyeen maleeshiyaadka Alshabaab ineey ka soo haraan mabda’a Takfiiriga ah, wuxuuna xusay in dowladdu ay soo dhaweeyneyso dhalinyarada isa soo dhiibta, iyadoo aan waxba loo raacaneynin.
Wafdi ka socda Jaamacadda Carabta oo la filayo inuu maanta soo gaaro Muqdisho